Ịrụzi diski ike gị
Ike disks bụ ihe kasị mkpa na kọmputa gị n'ihi na otu onye kpatara na i nwere ike ida gị zuru ezu data. Otú ọ dị, ị ga-mara na ike disks bụ n'ibu ngwaọrụ, na ga ada mgbe ogologo ojiji. Statistics na-atụ aro pasent 60 nke ike mbanye ọdịda bụ n'ibu odida na-anọgide na-adị ruru n'ụzọ. Lee ndị ole na ole ihe mere na diski ike ọdịda:
Anụ ahụ mebiri na etịbe bụrụ na kọmputa gị na-akpọ ụkwụ n'ime ihe.
Nyo na gị ikuku oriri na-clogged na gị nyo adịghị arụ ọrụ nke ọma karịa abawanye na okpomọkụ na-akpata na diski ike ọdịda.
Mberede ike odida pụkwara ime ka n'oge ihe ime ihe nwere ike ime ka diski ike ọdịda.
Failure apụtaghị na i furu efu gị data. Ọ bụrụ na ike mbanye bụ ndị ka dị mma n'ụzọ anụ ahụ, ị ​​nwere ike rụkwaa ya site onwe gị. Ebe a na-ụzọ ise ịrụzi gị ike draịva.
Way 1- Disk Tulee na akpaka Idozi
Way 2- Njikọ n'etiti ike mbanye na isi osisi
Way 3- ndabere gị data ka mpụga ike mbanye na Ọkpụkpọ emerụ diski ike
Way 4- Ọ bụrụ na ị na-eji a mac, na-agbalị Disk Utility ịrụzi disk
Way 5- Dochie PCB on diski ike
Olee otú naghachi data mgbe na diski ike reparation?
Ọ bụrụ na ị na-eji Windows karịa ya, na-enye ihe dị mfe nhọrọ na ịlele diski ike gị maka njehie na idozi ya-akpaghị aka. Ebe a bụ otú ị nwere ike ịlele ma idozi disk nke:
Jide n'aka na ị na-emechi niile na-agba ọsọ omume maka akpachara anya. Ugbu a ẹkedori My kọmputa.
Ugbu a nri pịa na diski ike mbanye na ị chọrọ ego. Ọ bụrụ na ọ bụ mpụga ike mbanye, jide n'aka na ị na-ama ejikọrọ ọ na-eji eriri USB. Mgbe nri pịa gaa Properties nhọrọ.
Mgbe a window Pop elu, na-aga Ngwaọrụ taabụ na-aga njehie Atule. Pịa na Tulee. A ga-achọ nchịkwa si ikike wee jide n'aka na ị nwere ya. Kwenye ma ọ bụ ịbanye paswọọdụ na-ekwe ka.
Ugbu a họrọ na-akpaghị aka idozi faịlụ usoro njehie na-akpaghị aka iṅomi ma idozi njehie.
Ugbu a na usoro nke ịgụ isiokwu ga-amalite na-akpaghị aka. Dabere na size nke diski ike gị, nke a nwere ike buru ruo ọtụtụ minit.
Nke a fix-achọ ka ị na-emeghe na kọmputa gị ma ọ bụ laptọọpụ ka ego njikọ dị n'etiti ike mbanye na isi osisi. Ruru ejighi ma ọ bụ ihe ọjọọ njikọ nwere ike njehie. Tupu anyị amalite usoro jide n'aka na ike bụ gbanyụọ zere ihe ọ bụla na mberede. Emeghe dum kabinet nke gị na kọmputa na-eso ndị a na-elele njikọ n'etiti ike mbanye na isi osisi:
Ị nwere ike ịhụ na e nwere ihe abụọ na ụdị USB otu maka SATA-acha uhie uhie na ide na agba ntụ. Mgbe ahụ e nwere SATA interface USB. Wepụ ma ndị a na-eme ka n'aka na ị ọcha ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na o kwere omume ojiji ikuku nwere ike iji wepụ ájá.
New jikọọ ya azụ ka mbanye ị ga-jikọọ SATA interface USB na SATA ike njikọ ma ọ bụ 4-pin Moelx njikọ.
Ego na nne gị osisi maka SATA njikọ ya. Ime otu ihe ahụ ihicha usoro na jikọọ na USB azụ.
Ugbu a ịgbanwee na kọmputa gị na ego ma ọ bụrụ na nsogbu ahụ na-egbo. Ọ bụrụ na ị na-amaghị otú imeghe kọmputa gị jide n'aka na ị na-aga n'ihi a teknishian.
Format bụ oké ụzọ weghachi gị emerụ diski ike na mbụ ala. Otú ọ dị, tupu ị nwere ike Ọkpụkpọ ya, jide n'aka na ị ndabere gị dum data. Ị na-achọghị ka ida si na dị mkpa faịlụ.
Ị nwere ike ndabere gị dum na kọmputa na mpụga na diski ike na i nwere ike nyefee ya azụ mgbe formatting kọmputa gị. Ị nwere ike iji a ọzọ software ma windows-enye gị ihe na wuru nhọrọ site na akara panel.
Ugbu a Gaa na-amalite na-emeghe akara panel.
Ugbu a gaa System na Nche.
Ọzọ aga ka Njikwa History na ị na-ahụ nhọrọ Chekwa ndabere mbipụta nke gị faịlụ na faịlụ akụkọ ihe mere eme.
Ọ ga iṅomi maka usable mbanye ndabere gị niile data. Dị họrọ ya na pịa n'aka na.
Nke a ga-azọpụta unu mkpa data na ọzọ disk.
Mepee akara panel na kọmputa gị na-aga usoro na nche.
Pịa na Nlekọta ngwá ọrụ na-emeghe kọmputa management.
Ugbu a gaa hapụrụ panel n'okpuru nchekwa, pịa Disk management. Ị ga-ahụ gị disk. Gaa disk na pịa usoro.
Nke a ga-Ọkpụkpọ gị iche disk. Ị nwere ike weghachi ị disk si azụ elu i mere.
Ọ bụrụ na ị na-eji Mac, i nwere ike iji Disk ịba uru ịrụzi ị diski ike. Nke a bụ mfe usoro Otú ọ dị, ị ga-achọ ka ị na disk nke Mac OS jide n'aka na ị na-ama kwadoo gị data na ndị ọzọ na diski ike n'ihi na n'oge idozi ị nwere ike hapụ gị mkpa data.
Ugbu a, họrọ ị disk site n'aka ekpe panel na ahụ na-aga ịrụzi Disk.
Ozugbo usoro na-okokụre wepuÚ installer na mgbe ahụ na-aga na-ahọrọ Mmalite Disk kama Malitegharịa ekwentị.
Họrọ gị os na kọmputa kama disk na mgbe ahụ Malitegharịa ekwentị ya.
Kọmputa gị ga-booted ọzọ na ego ma ọ bụrụ na ike mbanye njehie ka adịgide. Usoro a ga-edozi ụfọdụ njehie ma ọ bụrụ na e nwere ezigbo nsogbu na diski ike ọ ga-abụ mma ịkpọ ihe teknishian.
Ị nwere ike dochie biri ebi circuit iba na diski ike gị ma ọ bụrụ na ochie na-emebi ma ọ bụ merụọ. Ha na-awa site na diski ike na-emepụta. Kpọtụrụ emeputa na-chọrọ PCB maka draịvụ ike gị. Jiri eso nzọụkwụ na-eji dochie PCB. Lee ndị nzọụkwụ na-eso:
Ihe mbụ, ị chọrọ ime họrọ nri PCB. N'ihi na ị chọrọ ihe anọ ka dakọtara nlereanya nọmba, akụkụ ọnụ ọgụgụ, femụwe, na labeelu nọmba. Ị nwere ike ịlele ihennyapade n'elu na mmanya koodu. Nweta ndu n'ihi na-achọta kenha ndu.
Ozugbo ị chọtara nke mgbawa na gbanwee, gbanwee n'ime ọhụrụ osisi. Ọ ga-achọ ụfọdụ soldering ahụmahụ na ngwaọrụ. Gbapụ ochie mgbawa na solder azụ ọhụrụ mgbawa. Nke a ga-ntakịrị oru akụkụ, n'ihi ya, jide n'aka na ị ego nnọchi nduzi.
Ugbu a wụnye draịvụ ike gị na ego ọ na-arụ ọrụ na kọmputa gị.
Mgbe ike mbanye e rụziri, ị nwere ike naghachi ị kwụsịrị data iji Wondershare Data mgbake software nke bụ otu n'ime ihe ndị kasị pụrụ ịdabere na ngwá ọrụ dị irè na-agbake data. Ị nwere ike naghachi data atọ nzọụkwụ:
Jikọọ gị disk na kọmputa. Ẹkedori Wondershare software na kọmputa gị. Pịa na furu efu File mgbake nhọrọ.
On ọzọ ihuenyo, họrọ diski ike na ị chọrọ naghachi data site na pịa mmalite na-amalite ịgụ isiokwu.
On ọzọ ihuenyo, ị ga-enwe ndepụta nke faịlụ na ike ga-natara, họrọ faịlụ ị chọrọ iji naghachi na pịa naghachi.
Ndị a bụ nanị ụfọdụ nke mfe ụzọ ịrụzi diski ike gị. Ugbu a, ọ dịghị mkpa na-echegbu onwe mgbe diski ike gị na-aghọ rụrụ arụ!
> Resource> Draịvụ> 5 Easy Ụzọ ịrụzi diski ike gị niile site na Onwe Gị